Qubanaha » Muwaadin Soomaaliyeed oo ku dhawaad 20 sano u xirnaa Maareeyaha Dekedda Muqdisho
Muwaadin Soomaaliyeed oo ku dhawaad 20 sano u xirnaa Maareeyaha Dekedda Muqdisho
Xaashi Cumar Xasan oo ah muwaadin Soomaaliyeed kuna xirnaa dalka Talyaaniga muddo 19 Sano ah ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay kaalinta uu xarigiisa ku lahaa Axmed Washington oo dhawaan loo magacaabay Maareeyaha cusub Dekedda Weyn ee Magaalada Muqdisho.
Waxaana Xaashi Cumar Xasan oo ah dhibane Soomaaliyeed uu sheegay in dambi uusan la hayn dusha laga saaray, isla markaana loo keenay Cadeymo been abuur ah, isaga oo tilmaamay in Axmed Washington uu yahay Ninkii Maraqaatiga beenaalayaasha ah u keenay Kiiskii lagu soo oogay.
Dhinaca kale dhibane Xaashi oo si qiiro leh uga hadlay dhibaatooyinkii uu kala kulmay eedeymaha been abuurka ah ee uu ku soo oogay Axmed Washington ayaa waxa uu wax lala yaabo ku tilmaamay in xil sare loo magacaabo Nin ku caan baxay iibsashada muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Waxaana uu hoosta ka xariiqay in dowladda Soomaaliya looga baahanyahay in ay ka fiirsato dadka masuuliyadda loo dhiibayo oo qaarkood ku eedeysan Danbiyo waa weyn sida Axmed Washington oo hada ah Maareeyaha Dekedda Muqdisho.
Ugu dambeyn dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markii la dhisay waxa ay bilaawday tallaabooyin ay dadku aad u soo dhaweeyeen oo ay ka mid tahay wax ka qabashada Masumaasuqa iyo cadaalad darada, iyadoona ay xusid mudan tahay in dowladdaan loogu magac daray dowladdii shacabka, bulshada Soomaaliyeedna ay ka sugayso in dib u eegis ay ku sameyso madaxda qaar sida maareeyaha Dekedda Axmed Washington.